Nicaraguan hostel na-azọpụta mbe mmiri nke osimiri na-enweghị nchebe na nke dịpụrụ adịpụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Nicaraguan hostel na-azọpụta mbe mmiri nke osimiri na-enweghị nchebe na nke dịpụrụ adịpụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Nicaragua • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Surfing Turtle Lodge na Isla Los Brasiles, Nicaragua, dị njikere maka oge akwụkwụ mbe nke osimiri ọhụrụ, nke na-amalite Septemba wee kwụsị February. Ọrụ nchekwa nke Lodge laghachiri na 2009 yana nnukwu mbe ọhụrụ, a na-ewepụta ya iji tọhapụ mbe mbe karịa ụmụaka n'afọ gara aga.
Ka ọ na-abịa n'azụ ikiri agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba karịa ihe karịrị nnụnụ turu mmiri 5,500, Surfing Turtle Lodge arụọla ọkpụkpọ ọhụrụ iji tọhapụ ọbụna mbe. Site na ikike nke ihe karịrị nest 278 na ikike nke karịa nsen 27,000 kwa oge ọ bụla, a na-echekwa tlelọ Osimiri Surfing iji chebe ma hapụ ọnụọgụ ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya na Isla Los Brasiles, Nicaragua. Mgbe amụrụ nwa mbe, a na-ahapụ ha site n’enyemaka nke ndị ọbịa na ndị ọrụ afọ ofufo n’oge kachasị mma iji hụ na ha niile na-arịba n’oké osimiri n’enweghị nsogbu. Onyinye nchekwa anụ ụlọ nke Lodge bụ onyinye ndị ọbịa na uru sitere na Lodge.
Damian Romero, onye mbịara mmiri mmiri mmiri nke mbụ, Surfing Turtle Lodge kwuru, sị, “Llọ ahụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mpaghara ahụ. Kemgbe m rutere ebe a, ahụla m ka ọtụtụ ndị na-achụ nta na-agagharị n'ụsọ osimiri ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka Surfing Turtle, ụwa ga-efunahụ oke oke mbe nke oke osimiri. Site n'enyemaka ya, a na-eme ka hatcher nwere oke na mmetụta ka mma na agwaetiti ahụ na ọnụ ọgụgụ mbe mmiri nke ụwa.
Dị ka ọrụ izizi na-echekwa mbe mmiri na mpaghara ahụ, Surfing Turtle Lodge ewepụtarala iri puku kwuru puku turtle kemgbe ọtụtụ afọ. Agbanyeghị na Lodge nwere obi a andụrị na mpako maka ọrụ mbụ ọ rụrụ na mpaghara ahụ, ọ na-aga n'ihu na-esetịpụ ihe atụ ma na-ebute ụzọ na ọrụ nchekwa a na atụmatụ ndị ọzọ na-adigide.